ချစ်စရာမျက်နှာပေးလေးနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ အဲလစ်အုန်ကို ပရိသတ်တွေ သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ အပြစ်ကင်းတဲ့သူမရဲ့အပြုံးလေးတွေက အဲလစ်အုန်ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပိုမိုမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ ကြော်ငြာတွေနဲ့ ပွဲတက်တွေမှာ အဲလစ်အုန်ရဲ့ လှပမှုတွေကို ပရိသတ်ကြီးမြင်တွေ့ကြရမှာပါ။
သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ဖြူဝင်းတဲ့ အသားရေအလှတွေက အဲလစ်အုန်အတွက်တော့ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုပါပဲ။ အားပေးသူပရိသတ်တွေ အမာခံရရှိထားပြီဖြစ်တဲ့ အဲလစ်အုန်ဟာ လာအိုနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ချီးကျူးမှုခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကို ဂုဏ်ယူစွာပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်သွားသွား လှလှပပပြင်ဆင်သွားသင့်တဲ့အကြောင်းကို သူမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ယှဉ်ပြီးပြောပြလာတာပါ။
“A: Where are you from? 😶 Me: Myanmar 🥰 A: Oh! Myanmar girls are beautiful na 😍😁ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ အလှပြင်တာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေတာကိုစိတ်ရှည်ပေးကြပါ အပြင်သွားရင်လည်း သင့်ကိုမျက်နှာရစေသလို ခရီးထွက်ရင် လည်း နိူင်ငံတော် ကိုပါမျက်နှာရစေပါတယ်နော် 😉” လို့ အမျိုးသမီးတွေ လှလှပပနေသင့်ကြောင်း ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ မိန်းကလေးတွေလည်း အဲလစ်အုန်ပြောသလို ခရီးထွက်ရင်တောင် နိုင်ငံတော်မျက်နှာရစေဖို့ ဘယ်သွားသွားလှလှပပလေးနဲ့ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လေးသွားကြပါနော်။
ဘဝရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာနေ့လေးတစ်နေ့ကို ချစ်သူရဲရင့်အောင်နဲ့အတူ ဖြတ်သန်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
တစ်ပတ်အတွင်း ခါး (၂) လက်မကျသွားရတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြလိုက်တဲ့ အူဝဲ
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ လေးဖြူတို့ သားအဖရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ